ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း ၁၁၀၀ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းတို့မိသားစု – ShwePyiAye
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း ၁၁၀၀ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းတို့မိသားစု
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း ၁၁၀၀ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းတို့မိသားစု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ COVID-19 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ယခုချိန်ထိ တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ မတွေ့ရှိရသေးသော်လည်း ပြည်ပ နိုင်ငံများတွင် ပျံ့နှံ့မှုများ ရှိနေပါသဖြင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ( Pandemic )အနေဖြင့် ( ၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ EFF FOUNDATION( EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION )သည် ပြည်သူ့ဆေးရုံများအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ခါးပတ်ကြိုးပါ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ရောဂါ အကာအကွယ်ဝတ်စုံ( PPE ဝတ်စုံ ) ၃,၀၀၀စုံ၊ တစ်ခါသုံး ရာဘာလက်အိတ်များ( Vinyl Disposal Gloves )နှင့် ရောဂါကာကွယ်ရေး နှာခေါင်းစည်းများ( Face Masks )ကို တရုတ်နိုင်ငံမှ မှာယူထားပြီး လမ်းခရီး အဆင်ပြေပါက ( ၂၀.၃..၂၀၂၀ ) ရက်နေ့ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 အတွက်လှူဒါန်းမည့် ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် ဈေးနှုန်းစာရင်းမှာ
1. PPE ဝတ်စုံတစ်စုံလျှင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀/-နှင့် အစုံ ၃,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း ကိုးရာ)၊
2. ရာဘာလက်အိတ် တစ်စုံလျှင် ၂၀၀ ကျပ်နှင့် အစုံ ၂၅,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း ငါးဆယ်)၊ 3. N95 Mask တစ်ခုလျှင် ကျပ် ၄,၀၀၀/-နှင့် အရေအတွက် ၃,၀၀၀ ခုအတွက် ငွေကျပ် ၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်)၊
4. Face Mask (အထူ) တစ်ခုလျှင် ကျပ် ၅၀၀/-နှင့် အရေအတွက် ၂၀,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ရာ) စုစုပေါင်း လှူဒါန်းသောပစ္စည်းများ၏ ကျသင့်ငွေပမာဏမှာ ငွေကျပ် ၁၁၇,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ထောင့်တစ်ရာခုနှစ်ဆယ်တိတိ) ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ EFF FOUNDATION အနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံများသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူဒါန်းခြင်း ( သို့ ) ဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံများမှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဦးတင့်ဆွေ – ၀၉ ၅၀ ၆ ၂၂ ၆၆ ဦးဝေဖြိုးဇော် – ၀၉၉ ၇၇ ၆၆၆ ၉၉၄ ဒေါ်ကေသွယ်အောင် – ၀၉ ၅၃ ၉၄ ၈၈၈
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆး႐ုံပစၥည္း ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ဖိုး လႉဒါန္းသြားမယ့္ သီရိသုဓမၼသူႂကြယ္ဘြဲ႕ရ ဦးစိုင္းမ်ိဳးဝင္းတို႔မိသားစု
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ COVID-19 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ယခုခ်ိန္ထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မေတြ႕ရွိရေသးေသာ္လည္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ( Pandemic )အေနျဖင့္ ( ၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ EFF FOUNDATION( EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION )သည္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးပါ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ေရာဂါ အကာအကြယ္ဝတ္စုံ( PPE ဝတ္စုံ ) ၃,၀၀၀စုံ၊ တစ္ခါသုံး ရာဘာလက္အိတ္မ်ား( Vinyl Disposal Gloves )ႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား( Face Masks )ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မွာယူထားၿပီး လမ္းခရီး အဆင္ေျပပါက ( ၂၀.၃..၂၀၂၀ ) ရက္ေန႔ခန႔္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
COVID-19 အတြက္လႉဒါန္းမည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းစာရင္းမွာ
1. PPE ဝတ္စုံတစ္စုံလွ်င္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀/-ႏွင့္ အစုံ ၃,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း ကိုးရာ)၊
2. ရာဘာလက္အိတ္ တစ္စုံလွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အစုံ ၂၅,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္)၊
3. N95 Mask တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၄,၀၀၀/-ႏွင့္ အေရအတြက္ ၃,၀၀၀ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္)၊
4. Face Mask (အထူ) တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀/-ႏွင့္ အေရအတြက္ ၂၀,၀၀၀ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ရာ)
စုစုေပါင္း လႉဒါန္းေသာပစၥည္းမ်ား၏ က်သင့္ေငြပမာဏမွာ ေငြက်ပ္ ၁၁၇,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင့္တစ္ရာခုႏွစ္ဆယ္တိတိ) ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ EFF FOUNDATION အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လႉဒါန္းျခင္း ( သို႔ ) ေဆး႐ုံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဆး႐ုံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။
ဦးတင့္ေဆြ – ၀၉ ၅၀ ၆ ၂၂ ၆၆ ဦးေဝၿဖိဳးေဇာ္ – ၀၉၉ ၇၇ ၆၆၆ ၉၉၄ ေဒၚေကသြယ္ေအာင္ – ၀၉ ၅၃ ၉၄ ၈၈၈
Previous post ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုကို ဆေးရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေကို အခမဲ့ကုသပေးသွားမယ့် ရော်နယ်လ်ဒို
Next post အီတလီကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ အသက် ၈၀ နဲ့ အထက်အရွယ်တွေ